प्रेममा उमेरले छेक्दैनः १९ वर्षे युवाले ७२ वर्षे बेहुली वनाए , यस्तो छ पहिलो अनुभव ! - खबर खुराक- हरेक खबरमा विषेश खुराक
Home फरक संसार
in फरक संसार
एजेन्सी, १० बैशाख ।
प्रेममा उमेरको अन्तरले कुनै अर्थ राख्दैन भन्ने मान्यतालाई अमेरिकाको एक जोडीले सत्य सावित गरिदिएको छ ।
गेरी हार्डविक र अलमेडा बीच दुई वर्षअघि चिनजान भएको थियो । त्यतिबेला अलमेडा ७१ वर्षकी थिइन् भने गेरीको उमेर १७ वर्ष थियो । अलमेडाका छोरा रोबर्टको अन्तिम संस्कारका बेलामा उनीहरुको भेट भएको थियो ।
आफ्नी श्रीमतीको हत्या गर्न विमानमार्फत हमलाः आफु मरे श्रीमती बाँचिन
तपाईंको मोबाइल हरायो ? अब चिन्ता नगर्नुस्
अकल्पनिय विकासमा दुवई अगाडी, दुवईबारे केही रोचक कुराहरु यस्ता छन् !
मृत भनि दाहासंस्कार गरिएका एक व्यक्ति भारतमा ज्यूँदै भेटिए
बच्चा जन्मेकाे ८ महिनामा १८ किलो
अचम्मको घटनाः सेक्स गर्दा योनिभित्र लिङ्ग अड्किएपछि……….